मनोलोकको यात्रा | साहित्यपोस्ट
ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेका कवि आफूलाई उभ्याउने सङ्घर्षमा थिए, पहिचानको खोजीमा थिए । संसाररूपी भवसागरमा आफ्नो जीवन एउटा थोपा सम्झने उनी सोच्थे, यो थोपा भवसागरमा त्यसै बिलीन नहोस् । तर यो विदेशमा त सागरमा म एउटा थोपा खस्नुबाहेक अरू केही हुन सकेको छैन ।
सुमन पाण्डे	 प्रकाशित १० असार २०७९ १४:०१
जहाँ मै हुन्छु
मेरो कवि हुन्छ
एक प्राण भई
जिउन चाहन्छ ।
(म अनि मेरो कवि)
यी उद्गारहरु कवि जयप्रसाद पाण्डेका हुन्, जुन उनको “मनोलय” कवितासङ्ग्रहबाट लिइएको हो । आफ्ना मनोभावहरुलाई कविताको रुपमा ढालेर त्यसलाई छन्दमा सजाउन निपुण कवि जय प्रसाद पाण्डे आफ्नो जीवनको १९, २० वर्षकै उमेरदेखि साहित्य रसमा डुब्न थालेका थिए । कविता रच्ने, पत्रिकाहरुमा छपाउने र गोष्ठीहरुमा सुनाउने क्रम त्यसै बेलादेखि सुरु भएको थियो । उनको प्रस्तुत कवितासङ्ग्रह “मनोलय” एक डायास्पोरिक अनुभव बोकेको कृति हो । डायास्पोराको अर्थ हुन्छ आफ्नो मूल भूमि छोडेर अन्यत्र मुलुकमा गई बस्ने नागरिकहरु । मनोलयका सबै कविताहरु स्वदेशोन्मुख छन् र अधिकांश कविताहरु कवि भारतको बनारसमा रहेको बेला लेखिएको हो ।
वि. स. १९९९ मा जन्मिएका कविको सम्पूर्ण शैशवकाल र युवा अवस्था बनारसमै बितेको थियो । उनी बनारसमा हुदैदेखि चर्चित कवि एवं साहित्यकारको रुपमा चिनिँदै आएका हुन् । बनारसमा रहँदा उनलाई तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडेमीको संस्था नेपाली–साहित्य–सम्पर्क समितिको पहिलो सदस्य बनाइएको थियो साथै आजीवन विशिष्ट सदस्यता र कार्यकारिणी सदस्यता पनि प्राप्त गराइएको थियो । त्यहाँ हुदा उनले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति “ भावना–गाङ्गेय ” प्रकाशित हुँदा सम्पादकीय लेख्न पनि भ्याएका थिए । बनारसमा राम्रो साहित्यिक प्रतिष्ठा कमाए पनि उनलाई आफ्नो देशको मायाले छोडेन र पछि नेपालै फर्किए । वि. स. २०२१ सालपछि नेपाल आउदै जाँदै गरेपनि बि.स. २०२९ सालदेखि मात्र उनको यहाँ स्थायी रुपले बसोबास भयो । आफ्नो पुर्खाको थलो काठमाडौं भए तापनि उनको बसाइ भने बिराटनगरमा भयो । यसको मुख्य कारण जीवनसाथी त्यतैको भेटिनु थियो । कविको जीवन बिराटनगरमै बितिरहेको छ । हाल सम्म उनका सातवटा कवितासङ्ग्रहहरु प्रकाशित भइसकेका छन् भने अरु कविताहरु प्रकाशित हुन बाँकी नै छन् ।
डायास्पोरिक कविताहरुको संग्रह “मनोलय” पूर्वाञ्चल सहित्य प्रतिष्ठानबाट वि.स.२०७६ सालमा प्रकाशित भएको हो जसमा ८२ वटा कविताहरु रहेका छन् । डायास्पोरिक साहित्यको सिद्धान्त र समालोचना यी कविताहरु रचिएको समयभन्दा पछिल्ला दिनहरुमा बनिएको हो । उसबेलाको समयमा डायास्पोरिक साहित्यको बारेमा अनभिज्ञ हुँदाहुँदै पनि यी कविताहरुमा डायास्पोरिक भाव प्रबल रुपमा उर्लिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने यस्ताखाले भावहरु पहिले पनि उत्पन्न हुन्थे र अहिले पनि उत्पन्न हुन्छन्, फरक यति छ कि अहिले यस्ता भावहरु डायास्पोरिक साहित्य भनेर चिनिन थालिए र यिनको महत्त्व बढ्यो । प्रकृति र मानव जगतमै भएका कति कुराहरु पनि चिनिएका र बुझिएका हुँदैनन् । सिद्धान्तहरुपछि प्रतिपादन हुँदै जान्छन् तर तिनको आधार पहिल्यैदेखि विद्यमान रहिरहेको हुन्छ । यसो किन भएको होला भने भएकै कुरालाई पनि बुझ्न र सैद्धान्तिक रुप दिन ज्ञानको आवश्यक्ता पर्दछ ।
अमेरिका गएको बेलामा लेखेको एउटा कविता बाहेक यस संग्रहभित्रका सबै कविताहरु २०२० देखि २०३० को दशकमा रचिएका हुन् । बनारसमा हुँदा लेखिएका सबै कविताहरुमा उनले आफू आफ्नो देशभन्दा बाहिर रहँदा आफ्नो देश सम्झेर मनमा उब्जेका बह, दुःख र असन्तुष्टीहरुलाई व्यक्त गरेका छन् । कविका ती दिनका पिढाहरु “मनोलय”भरि जताततै छरिएका छन् । त्यसैले यिनले डायास्पोरिक भाव ओह्रालेका छन् । डायास्पोरिक यी कविताहरुले गहिरो काव्यात्मक अनुभूति गराउँछन् । दुःख, चिन्ता र पीरले मनलाई उद्वेलित बनाएको बेला कवि आफूलाई कविता रच्नमै समर्पित गर्ने गर्थे भन्ने कुरा यो कवितांशले उद्धृत गर्दछ ।
लेखौ म केही काव्य उत्तम
अश्रुबिन्दु छन् झरिरहेका
चढाउँछु माताकै चरणमा
स्वतः स्फूर्त जे जत्ति जुरेको
लेखौँ म केही काव्य उत्तम ।
(सालिक बन्न नसकेको)
मतृभूमिबाट टाढा रहँदा पंख चुडिएर उड्न नसक्दा छटपटाइरहने चरीसरी कवि सोच्थे म कहिले स्वदेश पुगुला र पल्लवित होलान् ममा पंखहरु अनि उन्मुक्त भएर स्वदेशको खुला आकाशमा म उडुँला । आफ्नो देशको क्षितिज उनी खोजिरहन्थे । आफ्नै देशको उज्यालोले प्रकाशित हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्दथे ।
आकाश मेरो क्षितिज कता ?
जहाँबाट म उदाउन सकूँ
अनि मनमा प्रेमोत्साह लिई
स्वदेश पुगी प्रकाशित हुन सकूँ
आकाश मेरो क्षितिज बता ।
विदेशमा बस्दा न कविको मन शान्त थियो न जीवनले कुनै भविष्य देखेको थियो, एउटा सकस, असन्तुष्टी र ब्यग्रता नै जीवनको नियति बनेको थियो । स्वदेशमा भए वनै सहि म आफ्नो अस्तित्व बनाउन सक्ने थिए तर यो अर्काको देशमा म जति नै घोटिए तापनि मेरो यहाँ के महत्त्व होला र, भन्ने गहिरो चिन्ताले सताउने गर्थ्यो उनलाई । त्यो अर्को देशमा उनको लागि कुनै गन्तव्य थिएन । गन्तव्यविहीन जीवन यात्राको एक यात्री त्यसै भट्किरहेका थिए । इच्छा त थियो नी स्वदेशका खोलाका सुसेलीहरुसँग बग्दै दोभान भेट्ने ।
निर्जन बिरान गिरि– गहवर भै
बगेकै छ गल्छी बगर भेट्दै
यात्रा यो दोभान बिनाको
दोधारमा रुक्न लागे झैं
निर्जन बिरान गिरि– गहवर भै ।
त्यतिबेला शिक्षाको उद्गम बिन्दु मानिने भारतको बनारसमा नेपालबाट थुप्रै विद्यार्थीहरु पढ्न जान्थे । कति नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका नेताहरु पनि उतै हुन्थे । त्यहाँ नेपाली समाज पनि थियो । ती सबैसँग हेलमेल गर्ने मौका कविलाई पनि मिलेकै थियो । त्यहाँ पढ्न गएकाहरु पढाइ सकेर नेपाल फर्कन्छौ भन्ने विश्वस्तताले गर्दा मातृभूमिबाट टाढा छु भन्ने पीढा बोध गर्दैनथे होलान् । तर कविको बुवाले उतै घर बनाएर बसिदिएकोले उनलाई अब म यतै पो रहने हुँ कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविकै थियो । उनको बुवा स्व. गोकुलानन्द पाण्डे नेपालका प्रसिद्ध ज्योतिषी तथा गणितज्ञ स्व. गोपालदत्त पाण्डेका छोरा थिए । आफ्नो पुर्खाको थलो नेपाल सम्झेर कवि त्यहाँ रमाउन सकेनन् । उनको आँखाभरी सधैं हिमालको चित्र रहन्थ्यो अनि मुटुभरि स्वदेशको माया । उनी आफ्नो देश सम्झेर यसरी ब्याकुल रहन्थे कि उनका शब्दाक्षरहरु पनि भावनामा झरी बादल भई स्वदेशै पुग्न खोज्थे ।
काव्यका यी अक्षरहरु सब
झरी बादल भै उठ्छ अबिरल
भिजाइरहन चाहन्छ स्वच्छन्द
मातृभूमिको तृषित दिशाञ्चल
झरी बादल भै उठ्छ अबिरल ।।
(दुःखको छ मिठो कहनी)
मातृभूमिसँग हाम्रो अस्तित्व जोडिएको हुन्छ । मातृभूमिको माटोमा नै हामी आफ्नो पहिचान सहित बढ्न र फैलिन सक्छौ, आखिर बिरुवा उसलाई उपयुक्त हुने माटोमै सप्रने त हो नि । आफ्नै समाज र परिवेश जहाँ हामी फस्टाउन सक्छौ त्यही माटोप्रतिको निस्कपट माया हाम्रो रगत र प्राणमा अविच्छिन्न रुपले एकाकार भइरहेकै हुन्छ ।
आज छ मेरो खण्डित गाथा
साक्षी छन् यिनै सगरमाथा
देखिन्छ कि त आत्माको भित्र
सुवर्ण रेखाड्कित स्वप्निल चित्र
आज छ मेरो खण्डित गाथा ।
(ढुड्गा हूँ म)
सागरभित्र म खस्नुको इतिहास सिवाय
अद्यापि यहाँ अरु केही भएको छैन
तथापि तल खोज्दै जानुको अर्थ सधैं
उपहासबाहेक अरु केही ता भएन,
सागरभित्र म खस्नुको इतिहास सिवाय ।।
(यो मेरो इच्छा)
आफ्नो जीवनका ती उर्बरकाल अन्यत्र बिताउन बाध्य भएका कविका ती दिनहरु घोर निराशाका थिए । स्वदेशै नपुगी आफूलाई नचिनाइकनै यो भिडमा त्यसै अलप पो हुन्छु कि भन्ने घोर चिन्तामा डुबेका थिए । चरम उदासीका ती दिनहरुमा उनी कविताकै सहाराले बाँचेका थिए ।
आत्माको आसव संग्लिकन
सुरभि बन्दै वासना फिजाउँछ
स्वदेश तिर्सनाभित्र लुकाई
कविता रसले यो मन भुलाउँछ
आत्माको आसव संग्लिइकन ।।
(आफू हारेँ )
कविको एउटै ध्येय थियो स्वदेशको माटोमा रमाउने । म सप्रने माटो मेरो देशमा छ, म एक दिन त्यहाँ पुगुला र त्यहाँको हावा पानिले सिंचिएर फक्रिउला भन्ने आशा जाग्दथ्यो पनि कहिले उनमा ।
म कोपिला फक्रन्छु होला
पछि सुवासित पनि त हुँला
मेरो माटो त छ अन्तै
अहिले दुःखै सहिरहुला
म कोपिला फक्रन्छु होला ।
(मेरो माटो त छ अन्तै)
मनै त हो फेरि अर्कोघरी त्यसो हुन सक्दैन कि, भनेर आफ्नो स्वचेतनालाई पनि निराशाका त्यान्द्राहरुले धमिल्याएको पाउथे उनी ।
निज चेतनाका नयन पनि
किन हो आज ता धमिलिए
तिर्मिर गर्छन् जगत दृष्य
हुन्थ्यो नि उज्यालो भैदिए
निज चेतनाका नयन पनि ।।
आफ्नो मातृभूमि छोडेर कसैलाई विदेश गएर बस्नु नपरोस् । सुनकै भए पनि के चरी पिंजडामा रमाउन सक्छ र ? आफ्नै भूमिमा रमाएर आफ्नै देशको सेवा गरौँ भन्ने भाव पोख्ने कवि मातृभूमिलाई नै सर्वस्व ठान्दछन् । “मनोलय”मा व्यक्त भएका कविका आत्माका आसवहरुले यस्तो देखाउछन् मानौ मातृभूमिसँग उनको सम्बन्ध भावनाले मात्र होइन प्राणले समेत जोडिएको छ ।
मर्नु कत्ति दुःखदायी
बाँच्नु छ उत्ति कष्टकर
न त मर्न सक्नु आफू
अमर तत्वमा स्वयं
प्राण यो सेलाएर ।
(लाग्छ सफल हुन्छु नै)
आफ्नो इच्छा विपरित मातृभूमिभन्दा अन्यन्त्र भूमिमा रहँदा कस्तो किसिमको असन्तुष्टी र व्यग्रताले सताउँदो रहेछ भन्ने बुझ्नको लागि कवि जयप्रसाद पाण्डेको “मनोलय” पढ्नै पर्ने हुन्छ ।
यो कुन मौसम हो प्रिय ?
यस्तो अचाक्ली उग्रता ?
राष्ट्रको छ यो ब्यग्रता
“मनोलयका” यी कोमल कविताहरु ह्रदयस्पर्शी छन्, पूर्ण प्राकृतिक भावले सिन्चिएका छन् र मातृभूमिको प्रेममा ओतप्रोत भएर छताछुल्ल बगेका छन् । एकएक कविता मातृभूमिप्रति समर्पित सुगन्धित पुष्पका गुच्छा प्रतित हुन्छन् । डा. गोविन्दराज भट्टराईका अनुसार यी कविताको समग्रतामा उसबेलाका सिद्धिचरण श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, महाकवि देवकोटाहरुको स्वच्छन्दतावादी कविताको प्रवृति र उन्मुक्त चेतना छ (“मनोलय”मा डा. गोविन्दराज भट्टराई लिखित भूमिकाको पृष्ठबाट) ।
कविताहरु कति मभित्र
सधैँ नै उर्लिरहेको
यौटा सुगन्ध छ मभित्र
कविताहरु कति मभित्र ।।
यो सुगन्ध न ता कुनै
फिँजिने सुरभि हो
वन्दन हो यो राष्ट्रको
यो सुगन्ध न ता कुनै ।।
अन्ततः एक दिन कविको सपना साकार भयो । उनी आफ्नो स्वदेश फर्के । आफ्नो देशको आकाश देखेर उन्मुक्त भावले रमाए । तर यहाँ पनि सबै कुरा उनले सोचे जस्तो पाएनन् । यहाँ पनि असमानताका खाडलहरु बनिएका थिए । यहाँ पनि विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरु थिए । मानिसलाई समस्या र दुःखमा देखे । त्यो देखेर उनको मन विकल भएर उठ्यो । तर जे जस्तो होस् उनले आफ्नै भूमिमा रम्न मन पराए ।
स्वदेश आएर म धन्य अनुभव गर्छु
वैषम्य देखेर चाहि छक्क पर्छु
प्रवासी हुँदा कहिल्यै नसोचेको
मनमा निरुपायताकै बोध गर्छु
स्वदेश आएर म सुखी अनुभव गर्छु ।।
कविको जीवनले स्वदेशको माटो भेट्यो र रमाउन थाल्यो । विराटनगरमा शिक्षकको पेशामा लागेर स्वदेशी जीवन सुरु गरे । कविसँगै कविका वागबगैँचा पनि सप्रदै गए । सुखका दिन फिरे पनि उनले आफ्नो अतीतको दुःखको आधारलाई बिर्सन चाहेनन् ।
निशि दिन केवल क्रंदन रोदन
दुःखहरुसँग प्यार मलाई
मेरो निर्वाणको चिर सहचर
बिर्सु म कसरी दुःख तँलाइ ?
निशि दिन केवल क्रंदन रोदन ।।
जतिसुकै बाँचेर जिन्दगी भोगीसके पनि जीवन के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर गौण नै रहन्छ । कसैले जीवन एउटा यात्रा हो भन्लान्, कसैले प्रेम नै जीवन हो भन्लान् र यस्तै अरु परिभाषा होलान् । तर मलाई लाग्छ जीवनभित्र नअटाएको केही छैन । त्यसैले कुनै एउटा कुरासँग मात्र दाँजेर जीवनलार्ई पूर्ण रुपले अथ्र्याउन सकिँदैन । जीवनका सम्पूर्ण आयामहरुलाई कुनै एक कुराभित्र समेट्न सकिदैन । जीवन के हो ? यो सधै एउटा चासोको विषय छ ।
ए कमल, ए किरण प्रिय ।
भन न भन जीवन के हो ?
के परिचय चेतन निलय ??
ए कमल, ए किरण प्रिय ।।
(ए कमल, ए किरण प्रिय)
समयसँग बितेको कविको जीवनले अब बुढेस्काल झेलिरहेको छ । जीवन दिनदिन ढल्दै जाने, शरीरले साथ नदिने, रोगले च्याप्तै जाने । प्रकृतिको यही नियम । शरीर दुर्बल भएको छ तर चैतन्य त्यो आत्माको प्रकाशले कवितारुपी उज्यालो छर्ने प्रयत्न गरि नै रहन्छ । उनका लागि कवितै जीवन छ । जीवन कवितामय छ ।
देह छ नश्वर साह्रै कोमल
को दिन्छ ताप यसमा पलपल ?
जीवन जल भै कविते आऊ
सुरभित मेरो मन हर्षाऊ
देह छ नश्वर साह्रै कोमल ।।
अन्त्यमा, कविको सुस्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्दछु । कवितारुपी कविका आत्माका लयहरु इत्रसरी गम्किरहुन्, युगयुगसम्म यीनको सुगन्ध फैलिरहोस्, उनको जीवनको समर्पण सफल होस् भन्ने कामना चढाउँदै यही रोकिन्छु ।
उमेर बढ्दै शरीर गल्दै
तर उपस्थिति छ सूर्यजस्तै
प्रार्थना छ मनमा सधैँ
रहिरहोस् यो झलमल यस्तै ।
जयप्रसाद पाण्डेमनोलयसुमन पाण्डे